China 3D သဘာဝရေစိုခံသော Hollow WPC ကုန်းပတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ လီဟွာ
သဘာဝရေစိုခံနိုင်သည့် Hollow WPC အလှဆင်ခြင်း
ထုတ်ကုန်များပိုင်ဆိုင်မှု:3D WPC ကုန်းပတ်
စျေးနှုန်း:$ 2,45 / M က
အရောင်:မီးခိုးရောင်၊ ကျွန်းသစ်၊ မီးသွေး၊ ချောကလက်၊ ဘရောင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်
3D ဖောင်းကြွ WPC ကုန်းပတ်
2800g / M က
2.4m, 3.6m, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြိုက်
ဝင်း, ဥယျာဉ်, ပန်းခြံ
Brushed နှင့် Sanding
၁။ နည်းပညာအသစ် 3D ဖောင်းကြွ WPC အပြင်ဘက်အလှဆင်ကြမ်းပြင်၊ အလှဆင်ပစ္စည်းများ။ 3D ဖောင်းကြွနည်းပညာသည်အပေါ်ယံထွင်းထုသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကြမ်းပြင်တစ်ခုစီသည်ပန်းပုနှင့်တူသည်၊ အနုပညာဝန်းကျင်နှင့်အမြင်အာရုံဒီဂရီသည်များစွာတိုးတက်လာသည်။ Classic 3D ဖောင်းကြွခြင်းသည်မြင်သာသောသစ်သား - ပလပ်စတစ်ကြမ်းခင်းများတွင်ကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြိုးများဖြင့်ပြန်လည်ထွင်းထုနိုင်ရုံသာမကစတင်သည်ဟောင်ခြင်း၏ခြေရာများကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
၂ ပေါင်းစပ်ကုန်းပတ် wpc မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်စပါးကိုဆုံးရှုံးရန်လွယ်ကူသည်, စူပါဖောင်းကြွကုန်းပတ်မဆိုဘုံပေါင်းစပ်သစ်သားထက်ပိုကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်, ကပိုပြီးသဘာဝနှင့်ဆွဲဆောင်မှုပိုကောင်းနွမ်းခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ခြစ်ရာ။
3.Lihua ရဲ့စူပါဖောင်းကြွ WPC ကုန်းပတ် ရိုးရာအပေါငျးတို့သအားသာချက်များရှိသည် ပေါင်းစပ်ကုန်းပတ် ထိန်းသိမ်းထားမှုနိမ့်ကျခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကြာရှည်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်နက်ရှိုင်းသောဖောင်းကြွပျဉ်ပြားများသည် 3D သစ်ခုတ်လှဲခြင်းကြောင့်သဘာဝသစ်သားနှင့်ပိုတူသည်။ မျက်နှာပြင်။
EN 15534-1: 2014 Section6.4.2 CEN / TS 15676: 2007 EN 15534-4: 2014 ပုဒ်မ 4.4
longtitudinal direction: Mean 72, Min 70 အလျားလိုက် ဦး တည်ချက်: Mean 79, Min 78
EN 15534-1: 2014 Section7.1.2.1 EN 15534-4: 2014 ပုဒ်မ 4.5.1
အဆိုပါနမူနာအဘယ်သူအားမျှတစ်အက်ကွဲlength≥နှင့်အတူတစ် ဦး ပျက်ကွက်ရလိမ့်မည်
10mm သို့မဟုတ်ကျန်ရှိသောအညွှန်း depth0.5mm ၏အတိမ်အနက်
Max.Crack အရှည် (မီလီမီတာ): အက်ကွဲအဘယ်သူမျှမအက်ကွဲ Max.Residual indenation (mm): 0.31
EN15534-1: 2014 AnnexA EN 15534-4: 2014 အပိုင်း ၄.၅.၂
500N Mean≤2.0mm, Max≤2.5mm၏ဝန်အောက်တွင် -Deflection
ကွေးအား: ၂၇.၄ MPa ၏ကွေးကောက်နိုင်မှုစွမ်းရည် - ၃၉၆၉ MPa အမြင့်ဆုံးဝန် - ၃၇၈၆N၊ ၅၀၀N တွင် Min ၃၅၄၀ နင့်မျက်နှာပြင် - ဆိုလိုသည်မှာ - ၀.၈၆ မီလီမီတာ - ၀.၉၉ မီလီမီတာ
EN 15534-1: 2014 Section7.4.1 EN 15534-4: 2014 ပုဒ်မ 4.5.3
အသုံးပြုသောအကျယ်အ ၀ န်း: Mean ∆S≤10mm, Max ∆S≤13mm, Mean ∆Sr≤5mm
Span: 330mm, mmS 1.65mm, Max ∆S 1.72mm, Mean ∆Sr 1.27mm
EN 15534-1: 2014 Section8.3.1 EN 15534-4: 2014 ပုဒ်မ 4.5.5
အဓိပ္ပာယ်ရောင်ရမ်းခြင်း - အထူ≤4%၊ .80.8%
အကျယ်ရှိ length0.4% အရှည်အမြင့်ဆုံးရောင်ရမ်းခြင်း - အထူ ၅%၊ အကျယ်≤ ၁.၂%၊ အရှည် .60.6% ရေစုပ်ယူမှု - ဆိုလိုသည်မှာ≤7%၊ အမြင့်ဆုံး≤9%
ဆိုလိုတာကရောင်ရမ်းခြင်း - အထူ ၁.၈၁%၊ အကျယ်မှာ ၀.၂၂%၊ အလျား ၀.၃၆% အများဆုံးရောင်ရမ်းခြင်း - အထူ ၂.၃၆%၊ အကျယ် ၀.၂၃%၊ အလျား ၀.၄၄% ရေစုပ်ယူမှု - ဆိုလိုတာက ၄.၃၂%၊ အမြင့်ဆုံး - ၅.၀၆%
EN 15534-1: 2014 Section8.3.3 EN 15534-4: 2014 ပုဒ်မ 4.5.5
အလေးချိန်ရှိရေကိုစုပ်ယူနိုင်သည်: Mean≤7%, Max≤9%
အလေးချိန်ရှိရေစုပ်ယူမှု - ဆိုလိုသည်မှာ - ၃.၀၆%၊ အမြင့်ဆုံး - ၃.၃၄%
EN 15534-1: 2014 Section9.2 EN 15534-4: 2014 ပုဒ်မ 4.5.6 ISO 11359-2: 1999
EN 15534-1: 2014 Section7.5 EN 15534-4: 2014 ပုဒ်မ 4.5.7
Brinell ၏မာကျောမှု: ၇၉ MPa elastic recovery ၏ ၆၅%
EN 15534-1: 2014 Section9.3 EN 15534-4: 2014 ပုဒ်မ 4.5.7 EN 479: 2018
စမ်းသပ်မှုအပူချိန်: 100 ℃ဆိုလို: 0.09%
ရှေ့သို့ 3D ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှု Composite Hollow WPC ကုန်းပတ်
နောက်တစ်ခု: အင်းဆက်ပိုးမွှားကာကွယ်ခြင်း Recyclable Wood Plastic WPC အလှဆင်ခြင်း
Boards Installation လမ်းညွှန်
ခြစ်ရာများ၊ nick များ၊ ဖြတ်တောက်မှုများနှင့် groove များကိုအနိမ့်ဆုံးလျှော့ချရန်နှင့်သစ်သားအလှဆင်ခြင်း၏အလှအပကိုထိန်းသိမ်းရန်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ
သူတို့ကိုရွေ့လျားသည့်အခါအချင်းချင်းကုန်းပတ်ကိုမလျှောပါနှင့်။ သူတို့ကိုယူနစ်မှဖယ်ရှားသောအခါကုန်းပတ်များကိုချီ။ ချထားပါ။
- ဆောက်လုပ်ရေးမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှမျက်နှာပြင်ကိုကုန်းပတ်ထားခြင်းမှကင်းဝေးပါ။ မျက်နှာပြင်ခြစ်ရာကိုအထောက်အကူပြုသောကုန်းပတ်ပေါ်ရှိအမှိုက်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအပျက်အစီးများကိုခြေရာခံခြင်း။
- သစ်သားထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့်မဆိုအလုပ်လုပ်ပါကသင့်တော်သောအဝတ်အစားများနှင့်လုံခြုံရေးပစ္စည်းများကို ၀ တ်ဆင်ပါ။
အနည်းဆုံး # 8 x 2-1 /2"အရည်အသွေးမြင့် coated, သံမဏိသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ကုန်းပတ်ဝက်အူကိုအသုံးပြုပါ။
- ကြိုတင်တူးဖော်ခြင်းသည်အေးသောရာသီဥတုနှင့်ကုန်းပတ်အဆုံးတွင် ၁-၁ / ၂” အတွင်းလိုအပ်သည်
- သစ်သားကုန်းပတ်များကိုစွဲစေရန်သို့မဟုတ်ကုန်းပတ်နှစ်ခုနှင့်အခြားမျက်နှာပြင်များအကြားရှိအဆစ်များကိုတံဆိပ်ခတ်ရန်ကော်သို့မဟုတ်ကော်ကိုမသုံးပါနှင့်။ ၎င်းသည်ပျဉ်ပြားများ၏သဘာဝချဲ့ထွင်မှုနှင့်ကျုံ့ခြင်းကိုတားဆီးပေးပြီးကုန်းပတ်၏ရေနုတ်မြောင်းကိုတားဆီးလိမ့်မည်။
- ကုန်းပတ်အောက်မှအစိုဓာတ်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းကိုလျှော့ချရန်aအနည်းဆုံးရှိရမည်
လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းစေရန်ကုန်းပတ်သုံးဖက်ရှိ ၁၂ လက်မမြင့်သောအတားမရှိအဆက်မပြတ်လေကြောင်း၏။
- အတွင်းပိုင်းထောင့်ကိုဆန့်ကျင်။ တည်ဆောက်ထားသည့်ကုန်းပတ်များအပါအ ၀ င်အကန့်အသတ်ရှိသော application များတွင်ကုန်းပတ်သည်အဆောက်အ ဦး နှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါနောက်ထပ်လေဝင်လေထွက်လိုအပ်သည်။ လေဝင်လေထွက်လုံလောက်စွာမပေးနိုင်ပါကကုန်းပတ်မျက်နှာပြင်ပျက်သွားနိုင်သည်။
Lisen Wood ကုန်းပတ်တပ်ဆင်ခြင်းညွှန်ကြားချက်များ
ဆောက်လုပ်ရေးအချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ အစီအစဉ်၏ဒီဇိုင်းရည်ရွယ်ချက်အရလိုအပ်သောပစ္စည်းများအားဘတ်ဂျက်ဆွဲခြင်းဖြင့်သက်သာစေနိုင်သည်။ သင်ဆန္ဒရှိသည်နှင့်အညီသင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်သောသစ်အမျိုးအစားများကို ရွေးချယ်၍ သစ်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သစ်သားဆောက်လုပ်ခြင်း၊ သစ်သားထည်လုပ်ငန်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၊
သင်ကုန်းပတ်ကိုတပ်ဆင်ပါက ဦး စွာမြေပြင်သို့မာကြောရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပြီး၊ ကျနော်တို့ 35-40cm များအတွက် joist အစေးအကြံပြုပါသည်။ တောင်းခံအကွာအဝေးကိုလည်း Joist အကွာကိုလည်းတိုစေနိုင်ပါတယ်။
ကုန်းပတ်ကိုတပ်ဆင်သောအခါအဆောက်အ ဦး နှင့် ၃ စင်တီမီတာအကွာအဝေးကိုစဉ်းစားပါ။
သစ်သားကုန်းပတ်၏ပူးတွဲကိရိယာအစုံမှာသံမဏိကလစ်များဖြစ်သည်။ လက်သည်း၏ self-tapping screws grip ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်တူးဖော်ခြင်းသည် 3/4 ၏ screw အချင်းထက်သေးငယ်သင့်သည်။
ပိုကြီးသောဆောက်လုပ်ရေးofရိယာကြောင့်သံသတ္တု၏အရှည်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။ Cross-section လိုအပ်သောအခါ 5mm အကွာအဝေးကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
1. အကယ်၍ သင်က groove နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက် clips များသည် joist နှင့် decking ၏ connection အတွက်မရရှိနိုင်ပါက self-tap screw နှစ်ခုဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
သင်ကုန်းပတ်ကိုတပ်ဆင်ပါက ဦး စွာမြေပြင်သို့မာကြောရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပြီး၊ ကျနော်တို့ 35-40 စင်တီမီတာအဘို့အ joist အစေးအကြံပြုပါသည်။ တောင်းခံအကွာအဝေးကိုလည်း Joist အကွာကိုလည်းတိုစေနိုင်ပါတယ်။
သစ်သားအလှဆင်သည့်နောက်ထပ်ပူးတွဲကိရိယာတစ်ခုမှာပလပ်စတစ်သံမဏိပြားများဖြစ်သည်။ လက်သည်း၏ self-tapping screws grip ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်တူးဖော်ခြင်းသည် 3/4 ၏ screw အချင်းထက်သေးငယ်သင့်သည်။
ကလစ်များနှင့်ကုန်းပတ်၏ချိတ်ဆက်မှုအတွက်ကလစ်များမရရှိနိုင်ပါကသင် groove ကိုချိတ်ဆက်ပြီးကိုယ်တိုင်နှိပ်ရုံဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
အစိုင်အခဲကုန်းပတ် Install လုပ်ပါ
အစိုင်အခဲကုန်းပတ်ကိုတပ်ဆင်သောအခါအဆောက်အအုံ၏ ၃ စင်တီမီတာအကွာအဝေးကိုစဉ်းစားပါ။ အစိုင်အခဲကုန်းပတ်ကိုမြင်နိုင်သောလက်သည်းများတပ်ဆင်ပြီးလက်သည်း ၂ စင်တီမီတာကိုအစွန်းသို့တင်လိုက်ပါ။
Q: သင်၏ထုတ်ကုန်များကိုဘယ်လောက်ကြာကြာ update လုပ်ပါသလဲ။
Q: သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအသွင်အပြင်၏ဒီဇိုင်းနိယာမကဘာလဲ။ အားသာချက်များကဘာလဲ?
Q: R & D မှာဘယ်သူတွေလဲ။ ဘာအရည်အချင်းတွေလဲ။
Q: သင်၏ထုတ်ကုန် R & D စိတ်ကူးကဘာလဲ။
Q: သင်၏ထုတ်ကုန်များ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကဘာတွေလဲ။ သို့ဆိုလျှင်တိကျသောအရာများသည်အဘယ်နည်း။
မေး။ ။ စက်ရုံစစ်ဆေးမှုကိုဘယ်ဖောက်သည်များသင်အောင်မြင်ခဲ့ပါသလဲ။
ဖောင်း WPC ကုန်းပတ်
စူပါ Embosed Hollow ကုန်းပတ်
ရေစိုခံ WPC ကုန်းပတ်
3D ခံနိုင်ရည်ရှိသောရာသီဥတုဒဏ်ခံ Composite Hollo ...
3D ဖောင်းကြွ UV Resistance Composite WPC ကုန်းပတ်
အဆောက်အ ဦး အပြင် Wood Deep Grain ဖောင်းကြွရေစိုခံ WPC ...
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနက်ရှိုင်းသောဖောင်းကြွအစိုင်အခဲ WPC ကုန်းပတ် E ...
WPC ပေါင်းစပ်ကုန်းပတ်, သစ်သားပလပ်စတစ်ပေါင်းစပ်ကုန်းပတ်, အပြင်ဘက် WPC ကုန်းပတ်, WPC ပြင်ပကုန်းပတ်, WPC ကုန်းပတ်, WPC ကြမ်းပြင်,